काे बन्ला युराेपियन वर्षकाे उत्कृष्ट फुटबलर ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रिय खेलकुद फूटबलकाे बन्ला युराेपियन वर्षकाे उत्कृष्ट फुटबलर ?
काे बन्ला युराेपियन वर्षकाे उत्कृष्ट फुटबलर ?
एजेन्सी , यूईएफए वर्षको पुरुष खेलाडीको घोषणा बिहीबार राति हुँदैछ । यो पटक युरोपको उत्कृष्ट फुटबल बन्ने होडमा तीन जना खेलाडी छन् ।बार्सिलोनाका फरवार्ड लियानल मेस्सी र युभेन्टसका स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डो पुरानै अनुहार हुन् । गोल गर्ने खेलाडीहरुको सूचिमा यो पटक गोल बचाउने खेलाडीको नाम समावेश भएको छ । अर्थात् लिभरपुलका डिफेन्डर भर्जिल भान डाइकले अन्तिम तीनमा स्थान बनाउन सफल भएका छन् ।यो अवार्डमा मेस्सी र रोनाल्डोको अधिपत्यलाई तोड्दै गएको वर्ष लुका मोड्रिच युरोपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए ।
अघिल्लो वर्षकै जस्तो नतिजा दोहोर्‍याउन अर्थात मेस्सी र रोनाल्डोको अधिपत्य तोड्न सक्नेमा डच डिफेन्डर भान डाइक आशावादी छन् ।पछिल्लो एक दशक जस्तै मेस्सी र रोनाल्डो यो अवार्डका दाबेदार रहँदै आएका छन् । विश्व फुटबल जगत नै यी दुई खेलाडीमा वर्गीकरण भएको छ । सन् २०११ मा सुरु भएको यो अवार्ड रोनाल्डोले तीन पटक (२०१४, २०१६, २०१७) जितेका छन् भने २ पटक (२०११, २०१५) मेस्सीले जिते । जुलाई ३१, २०१८ देखि जुलाई ३१, २०१९ बीचमा मेस्सी आफ्नो क्लब र देशका लागि प्रमुख गोलकर्ता रहँदै आएका छन् ।
१२ महिनाको समयमा मेस्सीले ५४ गोल गरेका छन् भने रोनाल्डोले ३१ गोल गरेका छन् । समयको रेसियोको कुरा गर्ने हो भने मेस्सीले प्रत्येक ८६ मिनेटमा एक गोल गरेका छन् भने रोनाल्डोलाई एक गोल गर्नका लागि १२७ मिनेट लागेको छ । मेस्सीले यो समयमा धेरै अनपेक्षित गोल गरेका छन् । यसको अर्थ हामीले अपेक्षा गरेभन्दा बाहिरको स्थानबाट मेस्सीले यो वर्षमा धेरै गोल गरेका छन् । उनको १५ गोल अनपेक्षित थियो ।यो सूचिमा पर्नका लागि युरोपको सर्वाधिक गोल कर्ता रोबर्ट लेवान्दोस्की भन्दा ११ गोल बढी गरेका थिए ।
लेवान्दोस्कीले यो सिजन ४० गोल गरेका थिए भने मेस्सीको गोल संख्या ५१ छ । साउथह्याम्टनबाट लिभरपुलमा आवद्ध भएपछि डच डिफेन्डर भान डाइकको प्रदर्शन अविश्मरणीय रह्यो । लिभरपुललाई च्याम्पियन्स लिग जिताउनका लागि उनको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रह्यो ।यस्तै, प्रिमियर लिगमा पनि उनको प्रदर्शन उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो । अहिलेसम्म यो अवार्ड कुनै पनि डिफेन्डरले जितेको छैन । यो संस्करणको अवार्ड जित्नका लागि भान डाइकले दुई जना गोलस्कोरिङ प्रतिद्वन्द्वीलाई उछिन्नु पर्नेछ । के उनी मेस्सी र रोनाल्डोलाई पछि पार्न सक्छन् ? उनको पछिल्लो एक वर्षको प्रदर्शन यस्तो छ ।
भान डाइकले आफ्नो क्लब र देशका लागि गत वर्ष कुल ५९ खेल खेले । त्यसमा उनले नौ गोल गरे र चारवटा एसिस्ट समेत भ्याए । उनले लिभरपुलका लागि कुनै पनि खेलाडीभन्दा धेरै समय (४,४६५) मैदानमा बिताए । लिभरपुल तथा डच डिफेन्सको मुटु मानिएका भान डाइकले आफूअघि आएका ७० प्रतिशतभन्दा बढी बल क्लियर गर्न सफल भए ।गएको सिजन प्रिमियर लिगमा सबैभन्दा कम गोल खाने टिम लिभरपुल थियो । जम्मा २२ गोल खाएको लिभरपुलको डिफेन्समा भान डाइकको प्रदर्शन यति बलियो थियो की उनको अगाडिबाट बल ड्रिबल गरेर कमैले मात्र बल बढाउन सक्थे ।
लिभरपुलका प्रशिक्षक जर्जेन क्लोप भान डाइकको प्रशंसा गरेर कहिले पनि थाक्दैनन् ।जर्मन क्लब बोरुसिया डोर्टमण्डका पूर्व प्रशिक्षक क्लोपले युरोपको उत्कृष्ट खेलाडीको ताज डिफेन्डरलाई दिने यो नै सबैभन्दा राम्रो समय हो भनेका छन् । टिमलाई जित दिलाउनका लागि भूमिका जति गोल गर्ने खेलाडीको हुन्छ त्यति नै गोल बचाउने खेलाडीको पनि । ‘आधुनिक फुटबल केही उदार हुनु आवस्यक छ,’ उनले भने ।